Dopamine agonist-induced penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်မှိုင်: D male ကဲ့သို့သော receptor အမျိုးအစားခွဲများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ and နှင့်အထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု (2012) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
Dopamine agonist-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း: အထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူD₂တူသောအဲဒီ receptor Subtype နှင့်ဆက်စပ်မှုများ differential ကိုအခန်းကဏ္ဍ (2012) ။
ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2012 မေလ 1; 230 (2): 355-64 ။ EPub 2012 ဖေဖော်ဝါရီ 25 ။
Sanna က F, Succu S က, Melis MR, Argiolas တစ်ဦးက.
ဘားခ Brody အာရုံကြောသိပ္ပံဦးစီးဌာနနှင့်စွဲ, Cagliari, အီတလီတက္ကသိုလ်များ၏ Neurobiology များအတွက် Excellence ၏ Center က။
အဆိုပါ dopamine D₃ သာ. နှစ်သက် agonist pramipexole (50 ng) သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ နှင့်ဟနေခြင်းသည့်အခါသွေးဆောင်နေစဉ်D₄ agonist PD 50 (168,077 ng) သည်, ရောထွေးD₁ / D₂ကဲ့သို့ agonist apomorphine (100 ng) ကဲ့သို့အထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း penile စိုက်ထူ သာ။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှု 45-60 မိကြာမြင့်ခဲ့ပြီး intracerebral microdialysis အားဖြင့် paraventricular နျူကလိယထံမှရရှိသော dialysate အတွက်NO₂-နှင့်NO₃-ပြင်းအားတစ်ခုတိုးနှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Pramipexole နှင့် apomorphine တုံ့ပြန်မှုရန် L-741,626 (5 μg) သာ. နှစ်သက်သည့်D₂အသုံးပြုပုံသော်လည်းမရန် SB-277011A (10 μg) သာ. နှစ်သက်သည့်D₃ဒါမှမဟုတ်သို့ထိုးသွင်းသည့်D₄ သာ. နှစ်သက်ရန် L-745,870 (5 μg), လျှော့ချခဲ့သည် ယင်းမတိုင်မီ PVN dopamine agonist ။ ဆနျ့ကငျြ, PD 168,077 တုံ့ပြန်မှု L-745,870 သို့မဟုတ် SB-741,626A အားဖြင့် L-277011 လျှော့ချပေမယ့်မခံခဲ့ရပါ။ Pramipexole, apomorphine နှင့် PD 168,077 သက်ရောက်မှုကိုလည်းသို့ငါအပ်သည်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase inhibitor က S-methyl-L-thiocitrulline (20 μg) နှင့် N-type ကိုဗို့အား-မှီခိုCa²⁺လိုင်းများ blocker ω-conotoxin (5 ng) ကလျှော့ချခဲ့သည် paraventricular နျူကလိယနှင့်မရောက်မီပေမယ့်မ paraventricular နျူကလိယသို့ intracerebroventricularly ပေးသော oxytocin ရန်ဃ (CH₂) ₅Tyr (ငါ့ကို) ²-Orn⁸-vasotocin (2 μg), နေဖြင့် dopamine agonists ။ ဤရလဒ်သည် pramipexole သို့မဟုတ် apomorphine အားဖြင့်D₂၏ဆွ, ဒါပေမယ့်မရD₃သို့မဟုတ်D₄ receptors, oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်Ca²⁺ဝင်လာတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်မှဦးဆောင်အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် oxytocinergic neurotransmission နှင့်ကျောရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသောနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏ထုတ်လုပ်မှု, တိုးပွါး penile စိုက်ထူ နှင့်ဟနေခြင်း။ သို့သော် PD 168,077 အားဖြင့်D₄ receptors ၏ဆွကိုလည်းဦးဆောင်Ca²⁺ရောက်လာ / နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွါး penile စိုက်ထူဒါပေမယ့်မရ yawning ။
မူပိုင်ခွင့်© 2012 Elsevier BV All rights reserved ။